Banijya News | मुख्य समाचार - Banijya News मुख्य समाचार - Banijya News
१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थविद् पौडेललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीको सिफारिसमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा कांग्रेसको सिफारिसमा पृथ्वीबहादुर गुरुङ…
साउन १२, काठमाडौं। शेयर बजार काराेबार मापक नेप्से परिसूचकले सबैभन्दा उच्च विन्दुको कीर्तिमान बनाएको छ । गएकाे आइतवार तीन हजार ५८ विन्दुमा पुगेर कीर्तिमान बनाएको नेप्सेमा आज मङ्गलवार तीन हजार ७९ विन्दुको नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । सोमबार ८ अंकले घटेको बजार आज फेरि २९‍.२ अंकले बढेर तीन हजार ७९ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको हो।…
साउन १२, काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज मसान्तभित्र १ करोड ५ लाख ४८ हजार मात्रा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ । १२ वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिने लक्ष्यसहित सरकारले यो योजना बनाएको हो । सोमबार संघीय प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको योजना समेतलाई समावेश गरि…
बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्यो, नाफा ६ अर्ब घट्ने
साउन १२, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंकहरुले असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशत नोक्सानी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरुले...
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० लाख कित्ता आइपिओ बिक्री गर्दै, सर्वसाधारणलाई कति कित्ता ?
साउन १२, काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले साउन २० गतेबाट धितोपत्रको प्रारम्भीक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न लागेको हो...
एक महिनामै सात अर्ब २० करोड रुपैयाँको सुन आयात, कसले प्रयोग गर्छ यो सुन ?
साउन ११, काठमाडौं । एक महिनामा नेपालमा करिब सात अर्ब २० करोड रुपैयाँको ९ सय किलो सुन आयात भएको छ। निषेधाज्ञाले रोकिएको १५ सय किलोमध्ये सुन ९ सय किलो आयात भएको हो। गत असार मसान्तसम्म १५ सय किलो सुन आयात...
अदालतले लगायो वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न रोक, दियो यस्तो आदेश
साउन ११, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई...
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल उठाउन मन्त्री भुसालको प्रश्न: “महसुल उठाउन हामीले कतिको सहजीकरण गयौँ ?
काठमाडौँ, साउन १० गते । सरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने भएको छ । प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्र्मचारीले...
सेयर बजारमा उच्च अंकको रेकर्ड, १४ अर्ब ३० करोडको कारोबार
साउन १०, काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दूमा पुगेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन ५४.३१ अंकले बढेको बजारमा परिसूचक ३ हजार ५८.६३ अंकमा पुगेको हो । यस अघि नेप्से परिसूचक ३ हजार ३२ अंकसम्म पुगेको थियो...
Page 1 of 3391234Next ›Last »